यो पनि त्यो पनि- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
पुस १५, २०७१
काठमाडौ — प्रियंका चोपडा यस्ती बलिउड अभिनेत्री मानिन्छिन्, जो सम्भावनाको हरेक क्षेत्रमा आफूलाई परीक्षित गर्न खोज्छिन् ।
मोडलिङबाट अभिनयमा आएकी कुनै बेला विश्व सुन्दरी केही समययता गायिकाका रूपमा सार्वजनिक भइरहेकी छन् । गोडा तिनेक सिंगल ल्याइसकेकी उनले कुनैमा प्रशंसा र कुनैमा आलोचना पनि पाएकी छन् । आलोचनाले उनको अठोटलाई डगमगाउला भन्ने लाग्दैन । उनी गायनलाई पार्ट टाइम बिजनेस मानिरहने सुरमै छिन् ।
अब उनको अर्को परिचय थपिँदै छ ।
३२ वर्षे अभिनेत्री अब फिल्म प्रोडयुसरका रूपमा अघि आउँदै छिन् । उनले यसको सम्पूर्ण तयारी गरिसकेकी छन् । 'म्याडमजी' अहिले पि्र-प्रोडक्सन स्टेजमा छ । आफू अभिनीत दुइटा फिल्मको सुटिङमा व्यस्त अभिनेत्री प्रोडयुसर बन्ने निर्णयले आफूलाई खुसी तुल्याएको बताउँछिन् ।
'म्याडमजी एउटा फिक्सन हो,' उनले भनेकी छन्, 'एउटी आइटम गर्लको कथा हो यो, जो पछि राजनीतिमा धकेलिएकी हुन्छे । यसमा महिला सशक्तीकरणको कुरा उठाइएको छ ।'
राम्रा स्त्रिmप्ट भएका तर अवसर नपाएका धेरै सहायक निर्देशकहरूलाई आफूले सुटिङहरूमा भेट्ने गरेको उल्लेेख गर्दै उनले थपिन्, 'ठूलो बजेटको फिल्म बनाउने मेरो सामथ्र्य छैन । त्यसैले म केही प्रतिभाशालीहरूसँग साना बजेटका फिल्म बनाउँछु ।'
२०१४ पि्रयंकाका लागि सफल वर्षकै रूपमा रह्यो । 'मेरी कोम' मार्फत प्रशंसा कमाएकी अभिनेत्री आउँदा दिनहरूमा पनि करिअरका लागि जोखिम मोल्न चाहन्छिन् । उनको भन्नु छ, 'करिअरको यो स्तरसम्म आइपुग्दा मैले कहिल्यै सुरक्षित बाटो मात्रै पछयाएकी छैन । 'मेरी कोम' लाई नै हेरौँ, मैले जोखिम मोलेकी छैन त ? 'बर्फी' खेल्ने निर्णय गर्दा मलाई त्यस रूपमा दर्शकहरूले स्विकार्दैनन् भनिएको थियो । मेरो लागि 'फेसन' जस्तै फिल्म फिट हुने ठोकुवा गरिएको थियो । अब अहिले म प्रोडयुसरका रूपमा आउन लाग्दै छु, एउटी आइमाईले प्रोडक्सन हाउस चलाउन सक्दिन भन्दै छन् मान्छेहरू । तर म यो अवसरलाई हातबाट फुत्काउन चाहन्नँ ।'
उनले स्वदेशमा निकैतिर हात हाले पनि विदेशी प्रोजेक्टहरूलाई पनि नाइँ भनेकी छ्रैनन् । अमेरिकाको एबीसी नेटवर्कको एउटा प्रोडक्सनमा उनी अनुबन्ध भएकी छन् ।
प्रकाशित : पुस १५, २०७१ ०९:५६
पुस १५, २०७१ फूलमान वल
काठमाडौ — विसं २०१५ तिरै विजय मल्लले नाटक लेखे, 'कोही किन बर्बाद होस्' । बालबालिकामा प्रेम र मातृत्वले पार्ने प्रभाव र अभिभावकको दायित्व सम्झाउने यो नाटक परिमार्जनसहित अहिले अनामनगरस्थित मण्डला थिएटरमा मञ्चन भइरहेको छ ।
एक घन्टा दस मिनेटको नाटक हेरेर निस्किँदै गर्दा मनमा अनेक तरंग उठ्छन्, के हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू नाटकमा जस्तै आदर्शका मन्दिर बनिरहेका छन् ? शिक्षकहरू कर्तव्यपरायण छन् ? अनि अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरीप्रति कति सचेत छन् ?
ध्रुव नामक एक बदमास विद्यार्थी, पि्रन्सिपल सुन्दर अनि शिक्षिका कमला । ध्रुव यति बदमास छन् कि साथीहरूलाई पिट्ने, घचेट्ने, कम्पासको सियोले घोचिदिने त उनका लागि सामान्य हुन् । फ्रायडका किताब पढिरहने र एक दार्शनिकझैं देखिने पि्रन्सिपल सुन्दर ध्रुवको बदमासीका कारणहरू पत्ता लाउनतिर लाग्छन् । सानैदेखि आमाको माया गुमाउनुपरेका कारण धु्रवमा त्यसको मनोवैज्ञानिक असर परेको र त्यही कारण उपद्रव गरेको ठम्याइका साथ पि्रन्सिपल सुन्दरले शिक्षिका कमलालाई 'नक्कली आमा' बनेर ध्रुवलाई माया दिन आग्रह गर्छन् । लामो बहसपछि कमला मान्छिन् । यसपछि नाटकमा सुरु हुने समस्या र पात्रहरूको भावनात्मक आरोहअवरोहले दर्शकलाई खिच्दै लैजान्छ, दर्शक कतै आँसु झार्छन् कतै हाँस्छन् ।
नाटकको 'बोर्डिङ स्कुल' एउटा आदर्श ज्ञान मन्दिरको रूपमा खडा छ । पि्रन्सिपल सुन्दरको पनि यही तर्क छ । शिक्षिका कमला आमाको मातृवात्सल्य दिएर ध्रुवजस्ता बदमासलाई सुधार्ने आदर्श शिक्षिका हुन्, जो पछि साँच्चिकै ध्रुवसँगको वात्सल्यमा पग्लिन्छिन् र ध्रुवले एसएलसी दिएर होस्टल र स्कुल छोड्नुपर्दा आफू 'नक्कली आमा हुँ' भन्न अनेकौं मानसिक तनाव बेहोर्छिन् । ध्रुवका बुबा आफ्नो सप्रेको छोरा लिन जिप चढेर आइपुग्छन् र शिक्षकशिक्षिकालाई धन्यवाद दिँदै फर्किन्छन् । खासमा अभिभावकको माया नपाउने बच्चाहरू कसरी बिगि्रन्छन् र तिनीहरूलाई माया दिएर कसरी सपार्न सकिन्छ भन्ने थिममा अडिएको भए पनि यो नाटक एकाधलाई छाडेर अहिलेका व्यापारिक शैक्षिक संस्थामाथि ठूलो व्यंग्य हो ।
च्याउसरी गल्लीगल्लीमा उमि्रएका बोर्डिङ स्कुलहरू पैसाका पछाडि दौडिन्छन् कि कर्तव्यको पछाडि ? तिनीहरू विद्यार्थीलाई आम्दानीको स्रोतको रूपमा मात्रै हेर्छन् कि भोलिको समाजका लागि चाहिने असल र ज्ञानवान् पुस्ताको रूपमा ? स्कुलको वातावरण पारिवारिक र प्रेमपूर्वक हुन्छ कि सजाय र कस्टडी गृहको रूपमा ? होमवर्क नगरेको नाममा कानको लोती च्यात्तिने गरी सजाय दिने अहिलेका 'बोर्डिङ शिक्षिका'का अघिल्तिर आफूलाई विद्यार्थीको आमाको रूपमा उभ्याउने कमलाको संवेदना कसरी तुलना हुन सक्छ ? नाटक हेरिसकेपछि यस्ता विपरीत दृश्यहरूले दर्शकको मस्तिष्कमा हान्छ ।
होस्टलका विद्यार्थीहरू किन छिट्टै डाक्टर (सिरिन्ज लाउने) बन्छन् र तिनीहरू लागूऔषध दुव्र्यसनको सिकार हुन्छन् भन्ने प्रश्नको गतिलो जवाफ पनि हो नाटक 'कोही किन बर्बाद होस् ।' किनभने यो नाटकमा बदमास ध्रुव सिरिन्ज लाउने तहसम्म पुग्नै पर्दैन, विद्यालयको पारिवारिक वातावरण र शिक्षकशिक्षिकाको प्रेमपूर्ण व्यवहारका कारण । नाटकभन्दा बाहिरको स्कुलहरूमा भने ध्रुवहरू स्कुल ड्रेसमै राजधानी छेउछाउको गाउँतिर गाँजा माड्न पुग्दा पनि शिक्षकलाई पत्तो नै हुँदैन । अनि कोही किन बर्बाद नहोस् ?
सुनील पोखरेल आदर्श पि्रन्सिपलका रूपमा रहेको यो नाटकले अर्को झापड हान्छ अभिभावकलाई । आमाबुबाको व्यक्तिगत मनमुटाव र झगडाका कारण बच्चाहरूले पाउनुपर्ने नैसर्गिक मायाबाट हाम्रो समाजमा बच्चाहरू कसरी वञ्चित भइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भलाई यसले बहसको रूपमा उठाएको छ । सम्बन्धविच्छेद लोग्नेस्वास्नीबीच हुन सक्छ, आमा बुबाबीच हैन । तर, हाम्रो समाजमा लोग्नेस्वास्नीबीच हुने हर डिभोर्सको पीडा बच्चाहरूले खेप्नुपर्छ । नाटकमा यही पीडाको सिकार बन्न विवश पात्र हुन् ध्रुव । पैसा या सम्पत्ति छ भन्दैमा ठूला आवासीय स्कुलतिर छोराछोरी राखेर ढुक्कसित रमाउने अभिभावकहरू पनि यो नाटक हेरेपछि झस्किने छन् । बच्चाहरूलाई मायाको खाँचो कति हुन्छ ? नाटक हेरेपछि तिनले आँसु बगाउने छन् ।
नाटकले अर्को पक्षलाई पनि बहसमा ल्याइदिएको छ, शिक्षकहरूको कर्तव्यपरायणता । हरेक शिक्षकहरू नाटकका पात्र सुन्दर जस्ता छन् ? शिक्षिकाहरू कमला जस्ता छन् ? दर्शक घोत्लिनेछन् । जब कि अख्तियारले व्यक्तिगत विवरण माग गरेपछि यतिबेला मुलुकभरका सामुदायिक स्कुलका शिक्षकहरू धमाधम राजीनामा दिइरहेका छन् । कोही नक्कली प्रमाणपत्रको कारबाहीबाट उम्किन, कोही कारबाही परे पेन्सन नपाइएला भन्ने चिन्तामा । यस्ता शिक्षकहरूबाट भोलि कस्तो नैतिकवान् र आदर्श नयाँ पुस्ता जन्मिन्छ ? अनि कोही किन बर्बाद नहोस् ?
गार्डेन थिएटरका लागि शंकर रिजालले परिकल्पना र निर्देशन गरेको यो नाटकबाटै सुनील पोखरेल अभिनयमा कमब्याक भएका छन् । साढे तीन दशकअघि नै यो नाटकमा शिक्षकको चरित्र गरेर तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको एकवर्षे नाटक तालिममा छानिएका थिए पोखरेल । साढे पाँच दशकअघि नै लेखिएको यो नाटकले अहिले पनि यति धेरै प्रश्नहरूसहित सान्दर्भिकता राख्छ कि हाम्रो सिकाइ प्रणाली र बच्चाहरू हुर्काउने तरिकामा खासै बदलाव आएको छैन । तर नाटकबाट भने सुनीलले एक आदर्श पि्रन्सिपलको छवि छाडेका छन् । कमलाको रूपमा केनिपा सिंह र ध्रुवको रूपमा उमेश पोखरेलले पनि सम्भिmन लायकको अभिनय गरेका छन् । कतैकतै नाटकको गति स्लो अनुभूति हुन्छ । मञ्च परिकल्पना खासै सिर्जनात्मक लाग्दैन । संगीत र प्रकाशसँगको दृश्य संयोजन चित्तबुझ्दो नै मान्न सकिन्छ । पुस ३० गतेसम्म हरेक दिन मञ्चन हुने नाटक अहिलेका शैक्षिक बेथितिमाथि एउटा शक्तिशाली व्यंग्य हो ।
प्रकाशित : पुस १५, २०७१ ०९:५४